Sandblaster Gun Factory - Mpanamboatra, mpamatsy orinasa Sandblaster China
Fandraisana an-tanana fasika famafazana tifitra mahery vaika, Soda, vakana, Walnut, Oksidana aliminioma - Pneumatika
【Sandblaster】 Ny vatan'ny aluminium dia maivana sy mora ampiasaina ary ny karazana tanan-tanana dia mora ampiasaina.
Azo ahitsy ny fikorianan'ny sandblast ary zaraina mitovy ny sandblasting hitehirizana fitaovana.
【Mora ampiasaina】 natokana ho an'ny karazana zoro metaly marevaka sy kely, sary hoso-doko, sisiny manta,
antsipirihany rusting; vilany lehibe azo ampiasaina amin'ny fasika isan-karazany: corundum mainty, karbôna silika, vakana fitaratra, sns.
【Fahombiazana maharitra ela】 - blaster fasika maharitra izay manapoaka potipotika haingam-pandeha
izay manala haingana ny loko, harafesina, harafesina ary mizana. Mampiasà blaster miaraka amina karazana media maro karazana toy ny fasika
aluminium oksida abrasives, vakana, soda na akorandriaka nendrika arakaraka ny filanao fampiharana no ilain'ny fampiharana.
【TANDREMO】 ： Mandritra ny fampiasana ny vokatra dia tsy maintsy manao fonon-tànana sy fiarovana ny maso ary fitaovana hafa ianao amin'ny fandidiana azo antoka.
Rehefa mampiasa ny kitapo basy ianao dia aza mikendry ny olona na ny biby ny basy.
Service Serivisy aorian'ny varotra matihanina】 Mijoro eo anilan'ny fividianana anao foana izahay. Raha tsy afa-po 100% ianao na inona na inona antony
azafady mba ampahafantaro anay ary ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hanampy anao hiverina na hamerina.
Gun Sandblaster Gun Blasting Gun ho an'ny kabinetra Sandblasting ho an'ny 990L / 1200L Sand Sandy Blasting Cabinet Sandblaster
Fitrandrahana fasika any anaty kabinetra basy sandblaster
Ho mety amin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery fipoahana azo alefa - vakana fitaratra, seramika, oksida aluminium ary habe vy sy tifitra sasany. Misafidiana haino aman-jery fipoahana mety ho an'ny fampiharana anao.
Ny basy fipoahana avo lenta dia manome fifehezana mahafinaritra ho an'ny mpandraharaha ary mamela ny fifehezana mazava tsara ny lamina fipoahana.
Mitazona ny fiaramanidina sy ny baomba mipetaka mifanaraka tsara mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fipoahana sy hampihenana ny fitafiana amin'ny vatan'ny basy.
Ny famolavolana pistol-grip ahazoana aina dia mampihena ny havizanan'ny mpandraharaha ary mampitombo ny vokatra mandritra ny fipoahana lava.
HOLDWIN manga Sandblaster Air Siphon Feed Kitapo fipoahana basy miaraka amina toro-hevitra amin'ny baomba vita amin'ny keramika
- Manaova fanoherana, fanoherana ny fikaohon-tany, maharitra.
- Fametahana fasika, vatosoa marbra.
- Fitaovana matanjaka hanalana ny tara, harafesina, loko efa taloha ary fitaovana maro hafa.
- Raha tokony handraraka vy dia alefaso vy ny firaka, mitsitsy vy, mampihena ny vidiny.
- Famolavolana tanjona marobe ho an'ny fanapoahana rano sy fanadiovana ranon-javatra na fanadiovana rivotra amin'ny faritra sy faritra ambonimbony.
Sand Blaster Gun Kit Portable Pneumatika Gravity Sandblasting Gun Sandblaster Machine Fitaovana, Esory ny harafesina ambonin'ny
PNEUMATIC GRAVITY SANDBLASTING GUN KIT: mora ampiasaina, famolavolana milina sandblasting azo entina, ny fantsona ambony dia mitazona medium 510CC.
OPERATION tsotra: Tsy mora ny mitondra azy fa mora ampiasaina ihany koa, ny fafafainganana dia haingana sy fanamiana ary mitsitsy fitaovana.
MULTIFUNCTIONAL: Ity basy spray ity dia manana rindrambaiko maro karazana, tsy ho an'ny sandblasting media ihany fa ho an'ny fitsaboana amin'ny tany sy ny fanamboarana ny fanaka.
Tohano ny VARIETI-PITSARANA MEDIA: toy ny soda na vakana fitaratra, sodium bicarbonate, silica, walnut, garnet, azonao atao ny mampiasa haino aman-jery sandy maharitra 46-100.
TANJONA: Ampiasaina manokana amin'ny famitana karazan'orinasa metaly maivana sy metaly kely rehetra, famafazana sy famolahana, sisiny masiaka ary antsipiriany momba ny harafesina ary fanadiovana ny dobo filomanosana, hosodoko, fandroana, taila, fitsaboana eny ambonin'ny fiara, fako milentika, fametahana vera, sns. .
Fitaovam-pitaterana sandoka vita amin'ny Pneumatika vita amin'ny tanana Rust Blasting Machine Machine Blasting Nozzle Heads Sand Blaster Nozzle
Fampiharana: fasika (oksida aluminium alimo volontany, vakana fitaratra sns)
Sandblast Gun Kit Kely tanana nitazona fasika sandoka Portable Pneumatika
Kitapo basy sandblast: Sand Blaster dia manisy valizy fanaraha-maso azo ovaina tanteraka mba hahafahanao misafidy sy mifehy tsara izay haino aman-jery hampiasa.
Fampiharana: Manokana ho an'ny zoro vy kely sy maivana, fanosotra amin'ny famafazana, sisiny masiaka, fanadiovana antsipirihany fanesorana ny harafesina
Main Bullet: maivana, tanana ary mora ampiasaina.
Portability: ny basy sandblast dia dingana ambonin'ilay mini sandblaster anao nefa mbola azo entina sy be mpampiasa.
Endri-javatra: Mandresy mora foana ny tetikasanao fipoahana fasika rehetra. Sandblasters dia natao manokana ho an'ny fampisehoana sy fanamorana fampiasana.
1. Mametraha tadivavarana fantsom-pianakaviana 1/4 ”NPT eo amin'ny fitoeran-tànana. Ny kasety teflon dia tolo-tanana mba hisorohana ny fivoahan'ny rivotra. Aza manenjana loatra, na mety misy ny manala ny sisin-by, na ny fehin'ny basy
2. Hamarino tsara fa tapaka ny lalan'ny rivotra.
3. Alao antoka fa madio sy maina indrindra ny rivotra natolotra. Tsy misy fasika Blaster hiasa tsara amin'ny rivotra feno entana hamandoana, UNIT TSY HIASA SORATRA mihoatra ny 125PSI.
4. Varavarana mikoriana fasika misokatra mankany amin'ny toerana irina. Apetraho amin'ny toerana lavitra ny fantsom-bakoly vita amin'ny seramika, apetraka amin'ny 6 ka hatramin'ny 24 sentimetatra eo ho eo.
1. Mijanona ny onja fasika
A. Ny rivotra entina dia mety misy hamandoana. Hamarino tsara fa napetraka ny mpampisaraka rano mety.
B. Hamarino ny tsindry rivotra (60PSI farafahakeliny takiana)
C. Atsaharo kely ny clip eo aloha eo amin'ny fitahirizam-bokatra, atsangano ary ahodina kely ny fitoeran-drano ary zahao ny orifice amin'ny valizy fanaraha-maso. Raha voasakana, esory ny fako ary amboary indray.
D. Hamarino tsara fa mihamafy tanteraka ilay noza (Tano mafy fotsiny).
E. Esory ny tsimoka mba hahitana raha very na tsy hita ny fampidirana vy. TSY MAINTSY TANANA BLASTER TANANA TANANA TANINDRAZANA raha tsy miditra ao anaty vy ny toerana.
2. Fomba fanao amin'ny fasika:
A. Ny rivotra entina dia mety misy hadisoana. Hamarino tsara fa napetraka ny mpampisaraka rano mety.
B. Ny fantsom-pitrandrahana fasika dia manana haben'ny sombin-javatra tsy mitovy ary tsy maintsy terena. Mampiasà efijery pattem kely misy fisokafana 1/16 maximum be indrindra.
C. Nozipo no anaovana ary tsy maintsy soloina.
D. INDRINDRA VOAFITRA DIA MAHASOA SA Very.
Borom-bozaka karbônika boron ho an'ny fipoahana mahery vaika
Diametera niteraka: 3mm, 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm
Basy sandblaster avo lenta ho an'ny kabinetra Sandblast suction
-Mety ho an'ny boaty karazana milina fanapoahana tanana ary boaty milina fanapoahana mandeha ho azy.
-Afaka ampiasaina amin'ny vera fasika, fipoahana fasika, famolahana ny tany, faritra mekanika.
-Ny nozatra dia manafaingana ny rivotra sy marokoroko satria ny fangaro dia mivoaka amin'ny faran'ny hosotra.
-Ny taper sy ny halavan'ny vavahady fidirana sy ny fivoahana dia mamaritra ny lamina sy ny hafainganam-pandehan'ny moka mivoaka ny nozatra.
-Ny firafitry ny fitaovana fisaronana dia mamaritra ny fanoherana entiny.
-Natao ho an'ny fanadiovana ny tany, ny fidinana ary ny vera, ny firaka aliminioma ary ny endrika haingon-trano hafa ho an'ny sokitra sandblasting sy marbra.
Basy sandblasting azo entina 90psi azo ovaina milina fanonoana kely azo avy amin'ny famafazana setroka Sandblasting
Basy fitifirana sandbeux tsy mahomby
- Fikorianana azo ovaina: fitaovana fanapoahana pneumatika dia afaka manitsy ny fikorianan'ny fipoahana mora foana.
- Kalitao avo lenta: Ny vatan'ny plastika sy aluminium dia maivana sy mora entina, miasa mora foana.
- Function: Natao ho an'ny karazan-jiro kely sy metaly kely, famolahana famaohana, sisiny manta, antsipirian'ny fanesorana ny harafesina sy maro hafa.
- Fahombiazana tsara: Omeo ny atomisma mitovy sy ny haben'ny ampahany amin'ny sary hosodoko.
- Portable: Vatana plastika, maivana ary matevina, azonao raisina mora foana.
- Fampiharana: mampiasa vilany vy mainty fasika isan-karazany sy maro hafa ireo vilany lehibe manana fahaiza-manao.
B type Abrasive sandblast Gun miaraka amin'ny Boron karbida nozzle G01
[Fitaovana]: Aluminium + borida karbida
[Size]: Boron karbônika Noza savaivony anatiny: 8mm
[Azo ampiharina amin'ny]: milina sandblasting manual ary boaty milina sandblasting mandeha ho azy
[Ampiasaina amin'ny]: vera fasika, sandblasting, fanodinana poloney ambony, faritra misy ny milina
[Natao ho an'ny]: fanadiovana ny tany, fanesorana ny harafesina sy vera, firaka aliminioma ary fasika amoron-tany hafa, sokitra marbra.
Tanana mitazona Sandblasting Gun Portable Pneumatic Abrasive Blasting Gun SJ-G08
Fiarovana anti-harafesina Air Spot Sand Blaster Gravity Feed Sandblasting Gun Portable Pneumatika Sandblasting Gun Fitaovana indostrialy
l Tanan-tànana mitazona basy sandblasting, portable pneumatika abrasive blasting gun
1.Araka ny fahazarana ampiasainao dia azonao atao ny manitsy ny fikorianan'ny sandblast ary manova ny nozera.
2.Mitafy fahaiza-manao avo sy tena mety ampiasaina izy io.
3.Ny seranan-tsambo fidirana amin'ny rivotra dia manome jiro sivana izay mety hisorohana ny fijanonana.
4.Misy be dia be ny hatsaran'ny vatany aluminium rehetra, toy ny maivana, maody fandidiana mora tanana, haingam-pandeha, fitehirizana fasika sy fitaovana fitehirizana.